Ma ogtahay inay Milan haysato Donnarumma 2-aad? (Wax ka baro muluqa Plizzari?) – Gool FM
(Milano) 11 Juunyo 2017 – In la helo goolwale da’yar misna halis ahi ma sahlana marka la eego guud ahaanba naadirnimada booskaas, lkn AC Milan waxay haysataa 2; Gianluigi Donnarumma, oo haatan xiddig wayn ka ah kooxdiisa iyo xulka Talyaaniga labadaba, iyo Alessandro Plizzari, oo nasiib xumadiisu tahay inuu uun sanad ka yar yahay Gigio. Waase laacib durba muujinaya saamayn la mid ah midda wiilka reer Campania, haddiiba uusan darnayn yarka reer Crema oo leh wax kasta oo uu xiddig wayn lagu noqon karo.
KORITAAN MUUQDA – 17-jirkan oo haatan ah goolwalaha 3-aad ee Rossoneri, wuxuu durba soo jiitey indhaha caalamka isagoo ahaa laacibkii ugu da’da yaraa ee maanta safnaa ciyaartii ay Talyaanigu ku galeen kaalinta 3-aad ee Koobka Adduunka 20-jirrada oo uu 2 rigoore ka qabtay Uruguay, taasoo taariikhda u gashay Azzurrini, isla markaana ay Milan ku xisaabtami karto inay haysato qabte kale oo mustaqbal leh.
MUSTAQBALKA MULUQAAN – Maalmihii ugu dambeeyay waxaa Casa Milan lagu arkayay wakiilka muluqan Tullio Tinti kaasoo Rossoneri kala hadlayay mustaqbalka muluqaan, iyadoo waxyaabaha miiska saarani ay ka mid tahay in la amaahiyo kooxaha yar yar si uu u bislaado.
Haddii uu lacalla meesha ka boxo Donnarumma, waxay Milan haysataa muluq kale oo ay mudan karto, yeelkeede, weli waa yara deg deg waayo waxaa gubi kara filashooyinka badan ee la dul dhigayo, sidaa darteed waa in la siiyaa bay’o nabadeed oo uu ku barbaaro isagoo ka gabbanaya indhaha warbaahinta, iyadoo mustaqbalka dhow ay Milan kaashan karto Donnarumma si ay ulasoo baxdo Donnarrumma kale oo u muuqda mid aan ka liidan amaba ka fiicnaan kara Giggio.